ဓါးပွတိုကျဖို. သနေတျမထုတျခငျ Hand Gel နဲ့ လကျအရငျဆေးခဲ့တဲ့ ဓါးပွမြား(ရုပျသံ) – Myanmar
ဓါးပွမတိုကျဖို. သနေတျမထုတျခငျ Hand Gel နဲ့ လကျအရငျဆေးခဲ့တဲ့ ဓါးပွမြား(ရုပျသံ)
ဒီနေ့ ဒီခြိနျခါဟာ ကိုဗဈအန်တရာယျကို ကမ်ဘာနဲ.တလှားရငျဆိုငျ နရေတာပါ ။ ကိုဗဈရဲ. စညျးကမျးခကျြတှကေို လိုကျနာခဲ့တဲ့ အခုလို ဓါးပွတှဟောလညျး တကယျပဲ ရှိနပေါတယျ။
စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနကေ့ ရှဆေိုငျတဈခုကို ဓါးပွဝငျတိုကျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ ဓါးပွဝငျတိုကျမှုဖွဈစဉျရဲ. CCTV ဗီဒီယိုဟာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော အလှနျပဲ ရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။
ဗီဒီယိုရဲ. အစမှာတော့ ဆိုငျထဲကို Mask တပျထားသူ သုံးဦးဝငျလာပွီး ၊ သူတို့ကို ဝနျထမျးတဈဦးက လကျဖွနျ့ခိုငျးပွီး လကျကို sanitiser ဖွနျးပေးကာ လကျဆေးစခေဲ့ပါတယျ။ ဓါးပွတှကေလညျး စညျးကမျးကို လိုကျနာတဲ့အနနေဲ့ လကျဆေးပွီးနောကျ သနေတျကိုထုတျပွီး ဝနျထမျးတှဆေီက ရတနာပစ်စညျးတှတေောငျးကာ ဓါးပွတိုကျပါတော့တယျ။
ဓါးပွတှဟော ကြှမျးကငျြစှာပဲ အသငျ့ပါလာတဲ့ ကြောပိုးအိတျထဲကို လကျဝတျရတနာတှနေဲ့ ငှတှေကေို ထညျ့ပွီး ထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားပါတယျ။ ဓါးပွမှုဖွဈစဉျဟာ တဈမိနဈတောငျ မကွာလိုကျပါဘူး။
ဖွဈစဉျကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံ Uttar Pradesh’s Aligarh မှာ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး ဒသေခံရဲတှရေဲ. အဆိုအရ ဓါးပွတှဟော ငှသေားအားဖွငျ့ ရူးပီးငှေ သုံးသောငျးကနေ လေးသောငျးကွား ၊ လကျဝတျရတနာ တနျဖိုး ရူးပီး သိနျးလေးဆယျဖိုးလောကျ ယူဆောငျသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ရဲတှဟော ဒီအမှုကို အမွနျဆုံး ဖမျးမိဖို့ ဆောငျရှကျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဓါးပြမတိုက်ဖို. သေနတ်မထုတ်ခင် Hand Gel နဲ့ လက်အရင်ဆေးခဲ့တဲ့ ဓါးပြများ(ရုပ်သံ)
ဒီနေ့ ဒီချိန်ခါဟာ ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကို ကမ္ဘာနဲ.တလွှားရင်ဆိုင် နေရတာပါ ။ ကိုဗစ်ရဲ. စည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာခဲ့တဲ့ အခုလို ဓါးပြတွေဟာလည်း တကယ်ပဲ ရှိနေပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ရွှေဆိုင်တစ်ခုကို ဓါးပြ၀င်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဓါးပြ၀င်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ. CCTV ဗီဒီယိုဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ အလွန်ပဲ ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယိုရဲ. အစမှာတော့ ဆိုင်ထဲကို Mask တပ်ထားသူ သုံးဦးဝင်လာပြီး ၊ သူတို့ကို ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက လက်ဖြန့်ခိုင်းပြီး လက်ကို sanitiser ဖြန်းပေးကာ လက်ဆေးစေခဲ့ပါတယ်။ ဓါးပြတွေကလည်း စည်းကမ်းကို လိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ လက်ဆေးပြီးနောက် သေနတ်ကိုထုတ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေဆီက ရတနာပစ္စည်းတွေတောင်းကာ ဓါးပြတိုက်ပါတော့တယ်။
ဓါးပြတွေဟာ ကျွမ်းကျင်စွာပဲ အသင့်ပါလာတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲကို လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ ငွေတွေကို ထည့်ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ ဓါးပြမှုဖြစ်စဉ်ဟာ တစ်မိနစ်တောင် မကြာလိုက်ပါဘူး။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh’s Aligarh မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေသခံရဲတွေရဲ. အဆိုအရ ဓါးပြတွေဟာ ငွေသားအားဖြင့် ရူးပီးငွေ သုံးသောင်းကနေ လေးသောင်းကြား ၊ လက်ဝတ်ရတနာ တန်ဖိုး ရူးပီး သိန်းလေးဆယ်ဖိုးလောက် ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရဲတွေဟာ ဒီအမှုကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းမိဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သုဝဏ်ဏကိုဗဈကုသရေး စငျတာကို လာမညျ့ တနင်ျဂနှနေေ့ အပွီးဆောကျမညျ